Ngo-2014, uzakwethu webhizinisi lase-India wasivakashela.Ngemva komhlangano wamahora angu-4, senze isivumelwano sebhizinisi sokuthuthukisa imakethe yamagesi akhethekile yase-India njenge-ethylene, i-carbon monoxide, i-methane enobumsulwa obuphakeme.Ibhizinisi labo lithuthuka izikhathi eziningana phakathi nokubambisana kwethu, likhule lize libe ngumnikezeli wegesi ohamba phambili eNdiya manje.
Ngo-2015, ikhasimende lethu lase-Singapore livakashela e-china ukuze lixoxe ngebhizinisi elide le-butane propane.Sisonke sivakashela umthombo wefekthri yezimboni zamakhemikhali kawoyela.Kuze kube manje, nyanga zonke hlinzeka ngamathangi angama-2-5 e-butane.Futhi Sisiza ikhasimende ukuthuthukisa ibhizinisi igesi more endaweni.
Ngo-2016, ikhasimende laseFrance livakashela ihhovisi lethu elisha lase-Chengdu.Lokhu kubambisana kwephrojekthi yisikhathi esikhetheke kakhulu.Ikhasimende limenywa nguhulumeni wase-Chengdu ukuthi livule “I-Helium Exhibition”, Inkampani yethu isekela lo msebenzi ngaphezu kwamasilinda ayi-1000 e-helium gas.
Ngo-2017, inkampani yethu yavula imakethe entsha yase-Japan ye-hydrogen sulphur ehlanzekile ngoba kukhona ukushoda e-Japan.
Ukuze kuxazululwe le nkinga, izinhlangothi zethu zombili zenze imizamo eminingi ngemithetho yefekthri 7s, ucwaningo lokungcola, ukuhlanza okokusebenza njll. Ekugcineni sikhiqize ngempumelelo u-99.99% H2S kusukela ngo-2019, futhi sithekelisa e-Japan ngokushelela.
Ngo-2017, ithimba lethu liyamenywa ukuthi lijoyine i-AiiGMA eDubai.Lona umhlangano waminyaka yonke we-india industrial gas Association.Sihlonipheke ngokuba lapho nazo zonke izifundo nokufunda zochwepheshe begesi ye-india, ukuze sicabange ngekusasa eliqhakazile lemakethe yegesi yase-india ndawonye.Ngaphandle kwalokho, siphinde savakashela inkampani yakwaBrother gas eDubai nayo.